कमाएको पैसा सकिएपछि काठमाडौँ बाट हिडेर सल्यान जादैं १७ बर्षीय ग’र्भवती महिला काठमाडौंँ जन जीवन कष्टकर भएर फर्किदै!
इँटाभट्टामा काम गर्दा कमाएको पैसा र अलिअलि भएको रासन सकिएपछि सल्यानकी एक ग’र्भवती महिला काठमाडाैंबाट सल्यानका लागि पैदल हिड्न बाध्ये भएकी छन् । सल्यान कपुरकोटकी १७ वर्षीया ग’र्भवती कमला घर्ती बिहीबार काठममाडाैंकाे नागढुंगा चेकपोस्ट हिडेर क्र,स गरेकाे समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेकाे छ ।
आउनुहोस पत्रकार बिनु सुवेदीले र फोटो पत्रकार प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना द्वारा गरिएको स्थलगत रिपोर्टिंग लाई विनुले कान्तिपुर मा लेखेको केहि अंश पढौं । बिहीबार बिहान ओरालो लाग्दै हामीले नागढुंगा चेकपोस्टका प्रहरीसँग सोधेका थियौं ‘आज कति जति म,जदुर हिँडेर बाहिर गए ? करिब ५ मिनेट मात्रै ओरालो झरेपछि भित्तामा अडेस लागेर सुस्ताएका तीन जना यात्रीलाई हामीले भेट्यौं ।
तीमध्ये एक जना सात महिनाकी ग’र्भवती रहिछन् । सल्यान, कपुरकोटकी १७ वर्षीया ग’र्भवती कमला घर्ती आफ्नै रहर या साथीसंगतिको लहलहैमा हिँडेर सल्यान पुग्न कस्सिएकी भने होइनन्। इँटाभट्टामा काम गर्दा कमाएको पैसा र अलिअलि भएको रासन ‘लकडाउन’ को २४ औं दिनमा आइपुग्दासम्म सकिएपछि उनीसँग जसरी भए पनि घर फर्किनुको अर्काे विकल्प थिएन।
पेटमा बच्चा छ, साहुले रासन पनि दिएन,’ कमलाले भनिन्, ‘जसोतसो घर पुग्न पाए हुन्थ्यो भनेर निस्किएका हौं।’कमलाका श्रीमान्सहितको टोली भने एक घण्टाअघि नै त्यहाँबाट हिँडिसकेको रहेछ। कमलाहरू चाहिँ काठमाडौंमा मालसामान छाडेर फर्किएका ट्रकले चढ्न देलान् कि भनेर पर्खिबसेका रहेछन्।
‘हिँड्न सकिएन, हाम्रो बि,जोग भयो ।
जसरी पनि लगिदिनुस् भनेपछि दया देखाउँछन् कि भनेर कुरेका हौं,’ कमलासँगै रित्तो ट्रक पर्खेर बसेकी कपुरकोटकै प्रतिभा बुढाले भनिन्। ‘जहाँको सास्ती सरकारले देख्दैन’ शिर्षक मा लेकिएको यो पोस्ट अहिले भाईरल नै भएको छ । तस्विर लेकाली अनलाईन बाट ।